Etu esi ewepu ndabere WhatsApp na Google Drive site na njikwa | Site na Linux
Otu esi ewepu WhatsApp na Google Drive site na njikwa
WhatsApp Ọ bụghị onye ozi n'efu, mana ọ dị nwute na ọ bụ sistemu ozi izizi eji rụọ ọrụ na ụwa, otu n'ime arụmọrụ ya bụ inwe ike ịkwado faịlụ anyị niile na mkparịta ụka na Google mbanye, nke enwere ike weghachite site na ngwa mgbe achoro. Ọ bụ ezie whatsapp gbakwunyere, ọ na-enye anyị ohere nke ịnweta nkwado a, oge a anyị chọrọ igosi gị esi wepụ WhatsApp ndabere na Google Drive site na njikwa eji WhatsApp Google mbanye extractor.
1 Gịnị bụ WhatsApp Google Drive Extractor?
2 Olee otu esi wụnye WhatsApp Google Drive Extractor?
3 Kedu ka ị si eji WhatsApp Google Drive Extractor?
Gịnị bụ WhatsApp Google Drive Extractor?
Ọ bụ edemede nke oghe emeghe, Mere eke site na otu nke Ngwa EliteAndroid, na-enye ohere ọrụ nke WhatsApp na gam akporo ike Wepụ data site na nkwado ndabere nke WhatsApp nke akwadoro na Google Drive.
Usoro a dị oke irè, anyị nwere ike ime ya site na njikwa anyị na nkesa GNU / LInux ọ bụla. Ekwesiri ighota na edemede a nyere anyi aka ideputa nkwado anyi na ihe omuma a choputara n’ime ha, n’otu aka ahu, o megharia nkwado ndabere anyi choro na komputa anyi ma nwekwaa ohere nke anyi bulite nkwado ndabere nke anyi n’igwe oji anyi ka emechaa weghachi anyị ama.
WhatsApp Google mbanye extractor
Olee otu esi wụnye WhatsApp Google Drive Extractor?
Ka ịwụnye WhatsApp Google mbanye extractor Anyị ga-enwerịrị eke na configparser maka nke a, anyị ga-eme iwu na-esote na Debian dabere na distros site na njikwa anyị:
Ozugbo anyị mezue ntụkwasị obi dị mkpa, anyị ga-eso usoro ndị a:
Mmepụta oyiri Official Repository nke WhatsApp Google Drive extractor:
Dezie nzere njikọ na «settings.cfg»:
Anyị dochie google mbanye aha njirimara na paswọọdụ.
Ekwenyela m na ezigara aha njirimara na paswọọdụ na ihe nkesa ọ bụla, mana echere m na ọ bụghị ụzọ kachasị nchebe iji tinye edemede ahụ, yabụ ọ dị mkpa iji ya nọrọ na ihe egwu anyị.
Na-agba ọsọ WhatsAppGDExtract.py site na njikwa:
Kedu ka ị si eji WhatsApp Google Drive Extractor?
Ozugbo anyị haziri WhatsApp Google Drive Extractor iji jikọọ na akaụntụ google anyị, anyị ga-eji otu n'ime iwu ndị a rụọ ya:
Seehụ enyemaka nke Akwụkwọ Nsọ:
Iji lee mbipụta na ihe ederede ahụ:
Seehụ nhazi google nhazi:
Iji depụta faịlụ dị iche iche:
Iji budata faịlụ niile na kọmputa gị:
Iji budata otu ndabere:
Ihe odide a magburu onwe ya ga-enye anyị ohere ịnweta ndabere WhatsApp anyị na Google Drive na ojiji ya nwere ike ịbụ ọtụtụ, dịka ọmụmaatụ, ịnwe ọrụ nke na-enye anyị ohere ịkwado ihe oyiyi anyị na WhatsApp nke ụlọ ọrụ anyị.
Kedu ihe ị ga-enye maka edemede a? Hapụ anyị echiche gị banyere ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » Otu esi ewepu WhatsApp na Google Drive site na njikwa
Nye jiri ya?
Zaghachi Felipe Cabada
Enwetara m njehie a - "Enweghi ike ịchọta map faịlụ draịva google maka: com.whatsapp"
Nwere ike ị nyere m aka?
Ndewo, enwetara m njehie a, onye ọ bụla maara ihe ị bu n'uche?
Faịlụ "WhatsAppGDExtract.py", akara 7, n'ime
ImportError: Enweghị usoro aha ya
Olee otu i si dozie ya ???
Iji dozie na ha nwere ịwụnye nhazi na arịrịọ modulu.
Ha na-eme ya na pipụ instal, ha ga-etinyerịrị ya
Ndewo Ray, ọ bụrụ na ọ bụghị oke nsogbu, biko ị nwere ike ịgwa m otu esi awụnye modulu configurarser na rqeuest? Daalụ n'ọdịnihu. Cheers
Hey antonz dijo
Enwere m nsogbu na iweghachite nkwado ndabere mgbe m gbanyeghachi WhatsApp, amaghị m ihe kpatara naanị "ghosts" nke foto m niile mekọrịtara, ya na 0kb, enwere m nchegbu n'ihi na echere m na m tufuru ihe niile mana ejiri m usoro a wee nwee ihe ịga nke ọma nwetaghachi ihe niile m chọrọ, daalụ nwoke
Enwetara m njehie = badAutentication
Aka m nwetara njehie ahụ, enweghị m ike idozi ya
ị nwere ike idozi ya?
Enwekwara m otu njehie ahụ
O doro anya na m na-eme, nzuzu iberibe m ji ya zuru ohi ozi WhatsApp m wee kpuchie m na fb m
You maara paswọọdụ Google gị?
mgbe m na-agba ọsọ faịlụ Wha… .r.py m ga-esi na-esonụ njehie:
ImportError: Enweghị usoro modulu aha ya bụ configparser
kedu ka m ga-esi merie ya. Daalụ nke ukwuu!
Wụnye modul configurarser na njikwa PIP
Nyochaa .. ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ, nsogbu na nyocha ọjọọ bụ ihe ndị na-esonụ, ị laghachiri ịtọ ntọala na ihe atụ wepu g wee tinye ya n'ọnọdụ ya ma chekwaa faịlụ ahụ ma mee iwu ahụ ọzọ ma ọ ga-agba ọsọ .. M mere mmekọrịta nke mere na ihe niile na-agbada ... ọ bụ ihe na-adọrọ mmasị ... ekele maka onyinye !!!
Zaghachi ka oliira
Ebe m nwetara G
Nke ahụ bụ ajụjụ, nke G kwesịrị iwepụ, wepụ ya na gmail, na mgbanwe na nbanye, mana ọ nweghị isi dị ukwuu ma ọ naghị arụ ọrụ, ana m achọ
Enyi kowaa nkowa, agbanweela m G mana o na-emehie njehie a.
Ihe ngbaghara dijo
Enweghị nzaghachi na nke a? Enwetara m otu njehie "BadAuthentication"
Ọ rụrụ ọrụ zuru oke, mana enwebeghị m ike ime ka ọ rụọ ọrụ ruo ọtụtụ ụbọchị.
Ma eleghị anya, WhatsApp ma ọ bụ Google mere mgbanwe ha n'elu ikpo okwu na nke a .py anaghị arụ ọrụ.
Ikekwe onye edemede nke ngwa ahụ wepụtara v.2 mana amachaghị banyere ya. TripCode!
Zaghachi iji nyochaa
Enwere m ike ime ka ọ rụọ ọrụ ọzọ, 🙂
kedu ka imere
Dee m ka: generacionmusical@gmail.com na m na-eso gị ọhụrụ Pyportify .py + Ngwugwu ama gbanwee kpamkpam maka ọrụ ya.
o kwere omume dijo
Njikere enyi !!! Ezigala m gị email site na roquines@hotmail.com
Zaghachi na pánfilo
Ukpekpo 2025 dijo
Nke a bụ email m, biko zitere m ozi a .py + Pyportify ngwugwu ama gbanwee kpamkpam maka ọrụ ya. dhelg2025@gmail.com
Zaghachi na dhelg2025
Ndewo, ụtụtụ ọma, ekele. Ọ bụrụ na ị nwekwara ike inyere m aka. M ga-enwe nnọọ ekele.
Achọrọ m ụzọ iji mee ka ọ rụọ ọrụ, iji novagaia@hotmail.com
Enwere m ajụjụ, gbasara sistemụ arụmọrụ, ebe ọ bụ na enwere ike ịme usoro a, n'ihi na adị m ntakịrị ọ na-akpọkwa uche m, inyocha, ekele
Zaghachi juan sanchez
Ọ dị onye mere ka ọ rụọ ọrụ? M ka na-eme ihe ọjọọ Nyocha ...
Ikwesiri ịbanye na Ghrome na onye ọrụ ịchọrọ iwepu ozi ahụ
Ezigbo, usoro a ọ ga - aba uru iji wepụ nkwado ndabere site na mbanye ma bulite ya na iCloud wee nwee ike weghachite nkata si gam akporo na iPhone?
Zaghachi Jorge Ibarra
Achọrọ m otu azịza ahụ, ị ​​chọtala ụzọ ị ga-esi mee ya?
Ọ naghị arụ ọrụ m, ọ na-apụta ...
Enwere m Linux Mint 18.2 Sonya
Budata arịrịọ Google Python ma wụnye, gbalịa ọzọ !!!
Ndewo Kedu kedu ka esi eme ya na mac? Biko nyere aka.
Cheregodi amaghị ihe mana ị nwere ike weghachite faịlụ ndị m kwadoro karịa afọ 2 gara aga na akaụntụ mbanye google na-enweghị ọnụọgụ site n'oge ahụ? Enyemaka
Gịnị ma ọ bụrụ na ị nwere ihe karịrị otu ndabere WhatsApp na nọmba ekwentị dị iche n'otu akaụntụ gmail ahụ?
Enwere m nsogbu na enyemaka Enyemaka !!!!
Nyere Aka Bata: Enweghị usoro Pyportify.gpsoauth
Lee ihe ngwọta maka BadAuthentication (azịza nke «alvaro354 kwuru na 26 Jul»)
Ekele, M nwere nsogbu Pyportify, ọ na-agwa m na modul ahụ adịghị, Enyemaka.
Rolando Maldonado kwuru dijo
Zaghachi Rolando Maldonado
M ga-enwe ekele dị ukwuu nye onye ọ bụla na-akwado m, ha maara ma ọ bụrụ na enwere mmelite ihe kpatara ha ji zitere m URL ma gwa m na njedebe na m ga-enweta kpọmkwem site na weebụ ma ọ gaghị ekwe ka m budata site na njikwa ahụ, vdd enwere m ụbọchị 30 tupu na ha na-ehichapụ WhatsApp m ma ana m atụ egwu na ha ga-ehichapụ ọrụ m niile m kwadoro ebe ahụ na karịa ihe niile ọ dị mkpa iji weghachite ya, daalụ n'ọdịnihu
Zaghachi Bryant rodriguez
Ezigbo enyi, eziterela m gị email…. Ana m echere azịza gị ozugbo ma ana m ekele gị nke ukwuu email m beir_123@hotmail.com
Ndewo Achọrọ m enyemaka, ọ na-enye m njehie ndị a:
enweghị ike imeghe faịlụ 'WhatsAppGDExtract.py': [Errno 2] Enweghị faịlụ ma ọ bụ ndekọ dị otú ahụ
Ngwọta ọ bụla.
Zaghachi ka itinye
onye nwere ike inyere m aka ime ya? Amaghị m otú, na m ngwa ngwa mkpa iji naghachi m ndabere.
Ego ole ka mmadụ ga-ana m ime ya?
Dee m na nzuzo: a nyochaa vessmailspam@gmail.com
Ndewo, enwetara m Error = BadAuthentication, mmadụ nyere m aka biko
Zaghachi Carlos G
Ekele, a ga-enwe ụfọdụ ụzọ ibudata ngwaọrụ ndabere nke na-echekwara na google mbanye. Dịka ọmụmaatụ, na nke m, echekwara nkwado ndabere na - ekwu: Samsung xxx computer backup. Daalụ
Onwere onye nyere m aka biko, amaghi m etu aga esi eme ya, ebupulam udiri ohuru nke Ubuntu gwa m na uzo nke abuo
Ahụghị iwu 'git' mana enwere ike itinye ya:
Ezigbo onye nwere ike inye m ụdị WhatsAppGDExtract.py kachasị ọhụrụ ebe ọ bụ na ọ na-enye m njehie:
Faịlụ "WhatsAppGDExtract.py", ahịrị 42
nwere oghe (obodo, 'wb') dika aku:
Kedu ihe m ga - eme nke na - efu efu ma ọ bụ na m na - emehie?
Python 2.4.3 (# 1, Jenụwarị 9 2013, 01:38:41)
-enyere m aka inwe otu njehie roymer1975@gmail.com
Obi ekele, enwere m ike ịme koodu ahụ site na Wowns Windown ma ọ bụ ka m mee ya na PC na LINUX dị ka sistemụ arụmọrụ?
Zaghachi Cesar Moreno
Chebe ihu gi na SafeEyes ihe ozo di nma kari Eyeleo
Mepee ngwa ọrụ iji dee akwụkwọ ọzọ gị